Tag: filter cinwaanka IP | Martech Zone
Tag: Cinwaanka IP filter
Sida loo Qoro loona Tijaabiyo Filters Regex ee Google Analytics (Tusaalooyin)
Jimco, Febraayo 26, 2021 Jimco, Febraayo 26, 2021 Douglas Karr
Sida qaar badan oo ka mid ah qoraaladayda halkan, waxaan u sameeyaa xoogaa cilmi baaris ah macmiil ka dibna halkan ayaan wax uga qoraa. Haddii aan runta u hadlo, waxaa jira dhowr sababood oo ay tahay… marka hore inaan xasuus daran leeyahay oo aan inta badan baaris ku sameeyo degelkayga macluumaad. Ta labaad waa in la caawiyo dadka kale ee iyagana raadinaya macluumaad. Waa maxay Muujin Joogto ah (Regex)? Regex waa qaab horumarineed oo lagu raadiyo laguna aqoonsado qaab